Qareen Cannabis Missouri - Dan Viets ayaa Ka Hadashay Cannabis in Missouri
Sharciga Cannabis ee Missouri oo leh Garyaqaan Dan Viets
Missouri ma sharciyeeyn doontaa Xashiishka Isticmaalka Dadka Waaweyn Sanadka 2020?
Qareenka cannabis ee Missouri, Dan Viets, wuxuu ku dhaqmay sharciga Missouri in ka badan 30 sano. Waqti badan ayuu ku qaatay sidii uu uga difaaci lahaa dadka reer Missourians sharciyada xashiishadda waqtigi hore. Ka sokow inuu xubin ka yahay guddiga NORML wuxuu sidoo kale helaa Conan O'Brien Abaalmarinta Caawa Fiidnimada 'Audiencey Award' ee "U eg mid aad u eg Professorka Kulliyadda oo Had iyo jeer Ku Soo Qaadi Kari lahaa". Waa nin muddo dheer u doodaya xashiishadda cannabis kaasoo horseed u ahaa dagaalka xashiishadda madaddaalada ee Missouri. Toddobaadkan Dan ayaa u tegay si ay uga hadlaan sharciyada xashiishadda maandooriyaha Missouri iyo waxay u qorsheeyeen Maalinta Doorashada.
Waa kuma Dan Viets?
Qareenka cannabis ee Missouri, Dan Viets, wuxuu hadda ka shaqeeyaa Columbia, MO
Wuxuu difaacaa kiisaska xashiishadda cannabis
Guddiga Agaasimayaasha ee NORML iyo Isuduwaha Gobolka Missouri ee NORML
Wuxuu ka soo muuqday maxkamad kasta iyo maxkamad federaal oo ku taal Missouri
Ku-dhaqanka sharciga ilaa 1986-kii
Missouri waxaa laga yaabaa inaysan haysan rikoorka ugu wanaagsan ee xashiishadda, laakiin waxay isku dayayaan inay taas beddelaan. Missouri waxay dooneysaa inay sharci ka dhigto xashiishadda madaddaalada sannadka 2020. Si ay u hesho codbixinta, si kastaba ha noqotee, waxay u baahan yihiin 160,199 saxiixyo ah illaa May 3, 2020. 2018, Missouri waxay u codeysay inay ka gudbaan Hindisaha Adeegyada Caafimaadka iyo Caafimaadka Veteran oo loo yaqaan Amendment 2. Amendment 2 Xashiishado sharci ah oo loo isticmaalo isticmaalka dawooyinka, ayaa lagu fuliyay canshuur 4% ah, taasoo tilmaamaysa in dakhliga cashuurtu ku baxayo adeegyada daryeelka caafimaad ee askarta. Wax ka baddelka 2 ayaa maray 65.59% codbixinta. Kobaca guryaha waa loo ogol yahay bukaanka iyo a shuruudo dhawr ah oo u qalma waxaa ka mid ah PTSD, IBS, iyo xaaladaha daba-dheeraada.
Muxuu u Isticmaalaa Dadka Waaweyn Sidii Masaarida?
Qareenka cannabis ee Missouri, Dan Viets, iyo Missourians for Habka Cusub, ayaa ururinaya saxeexyo loogu talagalay dadka waaweyn isticmaalka xashiishadda cannabis. Dadaalkan:
Dadka waaweyn 21+ ayaa loo oggol yahay inay iibsadaan oo lahaadaan xashiishad
Dembiyada cannabis qaar ayaa loo daadgureyn doonaa
15% canshuur ayaa lagu saari doonaa iibka tafaariiqda
Dakhliga canshuurta ee laga helo iibka tafaariiqda waxaa loo qoondeyn doonaa gudiga milatariga Missouri, Sanduuqa Wadada Gobolka, iyo ururada aan macaash doonka aheyn ee heeganka u leh daaweynta balwadda iyo kahortaga xad dhaafka ah
Muxuu Qareen Xashiishad Cannabis Missouri ah kuugu samayn karaa adiga?
Waxaa qoray: Simonat
Xashiishadda caafimaad waxay sharci ku ahayd Missouri illaa iyo xilligan 2018. Waqtigan xaadirka ah, waxaan aragnaa rabitaan xoogan oo ka imanaya sharci-dajiyayaasha inay sharciyeeyaan marijuana madadaalo ee Missouri 2020. Sidee bay tani u saameyn doontaa suuqa marijuana Missouri? Ma awoodi doonnaa inaan aragno ciyaar caddaalad ah suuqa marka ay timaaddo kobcinta, iibinta, iyo kaararka marijuana ee gobolka? Waxaan siinaa jawaabaha qeyb ka ah Dan Viets iyo Associates taasoo gacan ka geysanaysa abuuritaanka jawiga wanaagsan meheradaha iyo isticmaaleyaasha marijuana ee Missouri.
Marijuana ma sharci baa lagu noqon doonaa Missouri sanadka 2020?
Dhaqdhaqaaqayaasha Marijuana waxay si weyn u taageersan yihiin nidaaminta sharciyada marijuana ee Missouri. Codbixiyayaashu waxay heli doonaan fursad ay ugu codeeyaan isticmaalka dadka waaweyn ee marijuana ee Missouri sanadka 2020, kaasoo albaabada u furi doona fursado badan oo ganacsi gobolkaan.
Falanqaynta maaliyaddu waxay muujineysaa in gobolku soo saari doono illaa $ 155 milyan sanad walba marka la gaaro 2025. Saadaashaani waxay kahadlayaan fursadaha ganacsi ee ka jira gobolkaan. Gobollo badan ayaa sameeya dakhli aad u badan iyagoo uga mahadcelinaya nidaamka xakamaynta ee u oggolaanaya dadka isticmaala xashiishadda inay cunaan marijuana.
Marka ay timaaddo marijuanaada caafimaad, saadaasha ayaa inoo sheegaysa, in sanadka 2020, ay jiri doonaan ku dhawaad ​​19,000 bukaan marijuana caafimaad oo Missouri ka diiwaan gashan. Dhammaantood waxay uqalmayaan kaarka rasmiga ah ee xashiishka marijuana ee u adeegi doona sidii rukhsad u isticmaalidda marijuana ujeeddooyin caafimaad awgood.
Waa maxay micnaha sharci ee Marijuana ee shirkadaha gaarka loo leeyahay ee Missouri?
Codbixinta Noofambar 2020, cod bixiyayaasha Missouri waxay fursad u heli doonaan inay u codeeyaan sharci ahaanta xashiishadda taas oo u oggolaanaysa shakhsiyaadka 21 sano jir ah ama ka weyn inay lahaadaan hal wiqiyadood oo xashiish ah. Iibsiga ayaa suurtagal ah in laga sameeyo alaabada tafaariiqda leh ee hadda isku dayaya inay helaan rukhsado si ay uga mid noqdaan suuqa furan ee cannabis.
Dawladdu waxay ku dhawaaqday in 192 laysanno ah lagu bixin doono sanadkan Missouri, taas oo ah 16,5% oo keliya dhammaan codsiyada la soo gudbiyo ee la ansixin doono sanadkaan. Guud ahaan, 1,163 codsadayaal waxay isku dayaan inay helaan laysan loogu talagay kafeeyeyaasha gobolka oo dhan, kaasoo ka hadlaya baaxadda dakhligo suurtaggal ah oo la abuuri karo haddii gobolku u oggolaado codsadayaal badan inay helaan liisanka qaybinta.
Marka la barbardhigo, Colorado shati u leh 1,577 milkiilayaasha ganacsiga cannabis madadaalo ee 2018. In kasta oo tirada shatiyadaha la soo saaray ay waxyar hoos u dhacday 2020, waxaan ogaan karnaa sida ay Colorado u taageerto kaabayaasha iyo ganacsiyada yaryar ee ujeedkoodu yahay inay qayb ka noqdaan suuqa xashiishadda cannabis ee Colorado. Bishii Juun 2019, Colorado waxay gudbisay $ 1 bilyan dakhliga gobolka cannabis, taas oo ahayd mid ka mid ah natiijooyinka ololeyaal badan oo loogu talagalay isticmaalka dadka waaweyn ee mas'uul ka ah.
Waaxda caafimaadka ee rasmiga ah waxay soo saari kartaa liisamo fara badan oo ay rabaan, laakiin ra'yiga dadka Missourianska ah waa in xarumaha kala-baxa iyo xarumaha wax-soo-saarka ay yihiin kuwo xaddidan oo macquul ah. Codsadeyaasha liisanka shatiyada waxay marayaan nidaamka xulashada adag ee ku saleysan nidaamka dhibcaha. Inbadan oo kamid ah codsadayaasha waxay ka cawdeen nidaamka qiimeynta codsiyada sababta oo ah shirkadaha gaarka loo leeyahay waxay leeyihiin qawaaniin u gaar ah nidaamka qiimeynta. Haddii tani ay wali ku sii jeeddo magaalada Missouri, suuqa ganacsiga marijuanaada maxalliga ah waxaa laga yaabaa inay lumiso fursad weyn oo ku saabsan kobaca dakhliga guud ee suuqa.
Sidee Missouri Cannabis Qareennada uga caawin karaan sharciyeynta sharciyeynta Marijuana ee Gobolkan?
Iyada oo laga duulayo hindisaha guud ee sharciyeynta xashiishadda ee Missouri, waxaa soo baxaya su'aal ku saabsan calaamadinta saxda ah ee alaabada marijuana. Qawaaniinta sumadaynta ayaa saameyn ku yeelan doonta Missouri sida gobollada kale, oo ay ku jiraan South Dakota iyo Kansas, halkaas oo sumadaynta lagu calaamadeeyay badeecada hab gaar ah. Xirmooyinka iyo sumadaha waa inay buuxiyaan heerarka lagu dabaqayo talooyinka rasmiga ah. Xayeysiinta iyo suuqgeynta badeecada waa in sidoo kale si sax ah loo nidaamiyaa, khaasatan markay tahay xayeysiinta dhalinyarada da 'yarta ah ee ka yar 21 sano. Alaabada waa in si cad loogu calaamadeeyaa laguna xayeysiiyaa qaab aan raali galinaynin dhalinyarada.
Ma U Raadineysaa Qareenka Xashiishadda Missouri ee Missouri Xulashada Fiican ee Bilaabidda Ganacsi?
Ujeedada loogu talagalay sharciyeynta marijuanaanta ee Missouri waxay qaadaysaa fulinteeda buuxda 2020. Waxaan arki doonnaa sida uu gobolkani ula jaan qaadi karo waddammada horay u nidaamiyay isticmaalka marijuana raaxada. Saraakiisha waxay sheeganayaan inay tallaabo weyn u noqon doonto warshadaha xashiishadda Missouri ee la xiriirta xuquuqaha madaniga iyo sharciga.
Haddii aad qorsheynaysid inaad furto dukaan furan ama dukaanno tafaariiqda ah, waa inaad raadsataa a Qareenka cannabis ee Missouri yaa kaa caawin kara shuruudaha ganacsiga marijuana ee lagama maarmaanka u ah gobolka Missouri.
Sharciga Dan Viets